Tag: Google+ Obodo | Martech Zone
Tag: Google+ Obodo
N'oge na-adịbeghị anya anyị na-akọrọ nyocha anyị n'ịntanetị na teknụzụ ndị ọzọ na-emetụta ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ. Isntanetị bụ ngwa goto maka ịkwado ụlọ ọrụ ọrụ, ụlọ nri, na ndị ọzọ na-ere ahịa. Reputology bụ nyocha nyocha na ịkọ akụkọ. Ọ na-eziga ozi email mgbe ọ bụla mmadụ na-enyocha azụmahịa gị na Yelp, Google+ Local, Tripadvisor na saịtị nyocha ndị ọzọ. Site na ịzaghachi ngwa ngwa, ndị ahịa anyị nwere ike ịnweta onye nyocha na-enweghị obi ụtọ ịgbanwe obi ha 70% nke oge. Site na Ọrụ
Gbalị ịbanye na peeji nsonaazụ ọchụchọ maka otu isiokwu isiokwu nwere ike ịme ọtụtụ ọrụ. O juru m anya na ọtụtụ azụmaahịa mpaghara, n'agbanyeghị, nke ahụ anaghị erite uru na azụmaahịa Google. Arụrụ m ụlọ ọrụ kọfị kọfị kacha amasị m Indianapolis, The Bean Cup, iji nweta ezigbo injin nchọ… mana ihe mbụ bụ iji hụ na edepụtara ha na maapụ Google: Ọ bụrụ na ị na-eme ọchụchọ na Google maka kọfị